စစ်မျက်နှာ ဖွင့်ဖို့ရာ (@aggamun) — Steemit
စစ်မျက်နှာ ဖွင့်ဖို့ရာ (@aggamun)
aggamun (56) in blog • 15 days ago
Drugwars အကြောင်း ကျွန်တော် သိပ်မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သိသလောက်ပြောရရင်တော့ ခုချိန်ဟာ လက်နက်နဲ့ အရက် တွေကို ထုတ်လုပ်မှု အမြင့်မားဆုံး ရောက်အောင် တိုးမြှင့် ထားသင့်တဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သားတွေကိုလည်း ရသလောက် ထုတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ချို့သော Drugwars ကစားသူများ၏ စစ်သား အင်ပါယာ ကြီးမှာ လွန်စွာ တောင့်တင်း နေပါပြီ။ သူတစ်ပါးတပ်ကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက် နိုင်ရုံသာ မက မိမိ၏ နယ်မြေကိုပါ ကောင်းကောင်း ကာကွယ်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်သမျှ ဆေးဝါး တွေရယ် တိုက်လို့ ရသမျှ ဆေးဝါး တွေရယ် ပေါင်းပြီး အေးအေးဆေးဆေး STEEM တွေ ထုတ်စားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပုံရပါတယ်။ ဒါလည်း ကစားနည်း စနစ် တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စစ်သားတွေကို ကောင်းကောင်း မထုတ်ထားပဲ နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ရေရှည်မှာ အလှူ ပေးရဖို့ ရှိနေနိုင် ပါတယ်။ ဆေးဝါး တွေ ပေးလိုက် ရတယ်ဆို ပေမဲ့ ဒါက မိမိရမယ့် STEEM ကို သူတစ်ပါးအား ဆက်သ လိုက်ရသလို ခံစားရ မှာပါ။
ကျွန်တော့ ကတော့ မကြာခင် အရင်းကြေ တော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် အေးအေးဆေးဆေး တစ်ဆင့်ခြင်း သွားဖို့ ရည်မှန်း ထားပါတယ်။ စစ်သားတွေလည်း ရသမျှ ထုတ်ထား နေသလို အခြေခံ အဆောက်အဦးများကိုလည်း အဆင့်မြှင့် ထားပါတယ်။ resource ကုန်ကျစရိတ် က မြင့်မားလာ လို့ နှစ်ရက် မှ တစ်ခုလောက်သာ ကောင်းကောင်း တင်နိုင်တော့မှာပါ။
Heist ကလည်း အရင်က လောက် မရတော့ လို့ နည်းနည်း တော့ ခြေက်ကပ်ကပ် နိုင် လှပါတယ်။ ရသမျှလည်း သုံးပစ်နေတော့ storage ထဲမှာ သိပ်မရှိ ကြပါဘူး။ ဆိုတော့က တိုက်ခိုက်သူ နည်းနေသေးသော အကြောင်း တစ်ခုပေါ့လေ။
တိုက်လည်း မစို့ မပို့ လောက် ပြန်ရနေတော့ မတိုက်ချင်ကြတာလည်း ပါမှာပါ။ ဟုတ်တယ်လေ စစ်သား ထုတ်ရတာ resource ကုန်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု အားနည်းရင် တစ်နာရီ ကို စစ်သား ကောင်းကောင်း တစ်ကောင်တောင် မရပါဘူး။ ဒီတော့ ရေရှည် ကစားမယ်ဆို ……
စစ်သား များများ ထုတ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုအား တွေ မြှင့်ထား ကြပါဗျို့ လို့ ……
So many thanks for reading and visiting my blog.
Haveagood day to all steemians!
To play drugwars : https://staging.drugwars.io/#!/ref/@aggamun
To play steemmonsters : https://steemmonsters.com?ref=aggamun
To play Magicdice : https://magic-dice.com/?ref=aggamun
My bounty post for this week : https://steemit.com/msu/@aggamun/together-with-you-steembounty-thng-esny-nyaa-thng-wng-atu-week-13-aggamun
Posted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/aggamun/?p=20
blog drugwars gaming myanmar steempress
15 days ago by aggamun (56)
aggamun (56) · 15 days ago
bookkeeping (49) · 15 days ago
13.977 STEEM from daily
4.337 STEEM from heist
0.013 STEEM from referral
First transfer was before 21.35 days.
Your ROI per day is 4.39 % and you are earning approx. 0.86 STEEM per day.
Break even in approx. 1.4 days.
0.007 STEEM from delegation